Sidee baan u hubin karaa dhibcaha iigu jira ee hadda jira?
Waxaan inta badan maqlaa su'aalaha ku saabsan tijaabinta horumarka iminka jira ama qiyaasidda bogga internetka ee dhibcaha SEO. Laakiin miyay dareemayaan dareen kasta? Isaga oo si daacad ah u hadlaya, ma hubo in uu jiro wax wanaagsan, ama midkoodna dhibco SEO ah oo dhan kadib. Xaqiiqdii, fikradda ah "Search Engine Optimization" waa mid aad u weyn, oo leh dhinacyo badan oo ka mid ah istaraatijiyad kasta oo farsamo oo u baahan in si cad loo fahmo si aad u wado website-kaaga si aad ugu guulaysato guusha dhabta ah ee internetka. Waa hagaag, waxay u muuqataa sida ka jawaabista su'aasha ku saabsan cabbirka dhibcaha SEO noqdaan mid aan ku habboonayn. Xaqiiqdii, ma jirto dashboard la wadaago mashiinnada raadinta si aan u barbardhigo dhibcaha shabakad kasta oo shakhsi ah oo ka dhan ah kuwa kale ee ku lug leh qaybta warshadaha, ama ugu yaraan qaar ka mid ah qaar ka mid ah suuqa suuqa. Ma jiraan wax qalab shaqo ama qorshayaal isku mid ah si ay u sameeyaan falanqayn isbarbardhig ah oo dhammaantood ah: isku xirnaanta, calaamadaha bulshada ee kale, dhinacyada farsamooyinka muhiimka ah ee SEO, tirada khaladaadka bogga, xawaaraha xawaaraha bogga, ma aha in la xuso astaanta kala duwan iyo tayada lafteeda lafteeda. Jawaab noocee ah ayaa suurtogal ah in aan helno? Aan isku dayno inaan aragno waxa aan ku sameyn karno dhibcaha SEO si hubaal ah.
Waxaan isbarbar dhigi karnaa waxyaabaha muhiimka ah ee website-kaaga ah ee ka dhanka ah tartankaaga ugu dhow.
Ka hadlida aasaasiga ah, waxaan soo jeedinayaa in la barbardhigo waxqabadkaaga boggaaga ee hadda jira ee macluumaadka qashinka ah ee dadka kaa soo horjeeda. Waxaan baran karnaa taraafikada organic-ga ah ee ka imanaysa waraaqaha muhiimka ah ee warshadaha isku midka ah, iyo sidoo kale dhagaystayaasha suuqa oo isticmaalaya weedhahan muhiimka ah markay raadinayaan badeecooyinka ama adeegyada. Marka aad sidaan sameyso, waxaad awoodi doontaa inaad aragto in aad u socoto jidka saxda ah, ama waxaad u baahan tahay inaad kiraysto khabiirada si dhakhso ah. Taas micnaheedu waa in helitaanka SEO-gaaga ka shaqeeyaa dibadda laga yaabo inay mararka qaarkood noqoto mid si fiican loo abaabulo, ma aha in la yiraahdo go'aanka keliya ee lagu badbaado.
Waxaan baran karnaa waaya-aragnimada ugu wanaagsan ee dadka kaa soo horjeeda iyo inaad xor u tahay inaad isticmaasho.
Waxaan rumaysanahay in la ogaado calaamado cad cad oo ku saabsan horumarkaaga tartame ee tartameedka iyo codsigiisana ku saabsan farsamooyinka ugu guuleysiga badanaaba waa mid caqli ah oo cad oo lagu hagaajinayo dhibcahaaga SEO. Si kastaba ha ahaatee, macnaheedu maahan in halkan lagu dhaqmo sida copycat. Kaliya diirada saari waxyaabaha ugu wax ku oolka ah iyo bilaabista nolosha nolosha bogaggaaga. Bal qiyaas, qofka ugu xooggan ee ka soo horjeeda ayaa faa'iido fiican ka helaya warbaahinta bulshada ee caanka ah. Sidaa darteed sababta aadan u raacin suumanka loona wanaajiyo dhibcaha SEO-ga sida alaabta la isticmaalo, sida jacaylka, sheekooyinka, iyo saamiyada Facebook, tusaale ahaan?
Waxaan ogaan karnaa waxa dadkaaga ka soo horjeeda si khaldan u hubsanaya si hubaal ah.
Inkastoo ay ku lug leeyihiin dagaal kasta oo tartan tartan ah, waxay noqon kartaa fikrad fiican oo aad ku guuleysan karto ciyaarta iyadoo la fahmi karo daciifnimadaada cadowgaaga. Qorshahani wuxuu macno weyn u yeeshaa marka loo isticmaalo in lagu nadiifiyo dhibcahaaga hadda jira ee SEO. Sidaas darteed, ha ka waaban inaad samayso si sax ah u isticmaalida shey kasta oo ka maqan dadka kaa soo horjeeda - waa inay noqdaan istaraatejiyadooda ama wax kasta oo kale ee Mashruuca Optimization Search waxay weli isticmaalaan maaha Source .